Bangkok International Dental Hospital သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကု ဆေးခန်း - Sukhumvit Soi2Ploenchit
BIDH သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကု ဆေးခန်း
ဘန်ကောက် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း (BIDH) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယုံကြည်ရသော သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း အဖွဲ့မှ ဆူခွန်ဗစ် ၂ လမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါမျိုးစုံအား ကုသပေးလျက်ရှိပြီး အတွင်းလူနာခန်းများနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းများလည်း ရှိပါသည်။
BIDHတြင္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ား၊ခြဲစိတ္ခန္းမ်ားႏွင့္ Dental Labတို႔႐ွိေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွ ရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္ Digital Dental Lab ႐ွိျခင္း
အဆင့္ျမင့္ Digital Dentistry နည္းပညာကို BIDH ၏လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Digital Dental Lab တြင္ သြားတုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူနာတစ္ဦးခ်င္း စိတ္တိုင္းက် ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္ဆန္တိက်၍ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို ရ႐ွိႏုိင္ပါၿပီ။
Digital Scan & Lab
BIDH Dental Hospital သည် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် အကောင်းဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခေတ်မီ Digital Dentistry နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားပြီး ဆေးရုံတစ်ခု၏ အဓိက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သော အဆင့်မြင့် ရောဂါပိုးသန့်စင်စနစ်ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။
BIDH သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန် အဖွဲ့ကြီး မှ တာဝန်ယူဖွင့်လှစ်ထားပြီး သွားဆေးခန်းအခွဲများစွာအား ဘန်ကောက် ၊ ဖူးခက်နှင့် ချင်းမိုင်တို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကြာပြီဖြစ်သော သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း အဖွဲ့ကြီးသည် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုများကို ပေးလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာမှ လူများစွာကို စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေသောကြောင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များစွာလည်း ရရှိထားပါသည်။
Choose BIDH Hospital
Dental Corporation PLC. သည် ထိုင်းနိုင်ငံစတော့ရှယ်ယာစာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး အခြေခိုင်မာသော သွားဆေးခန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ကြီးသည် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း များ ၊ သွားဆေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် နှင့် သွားတု အလုပ်ရုံ Dental Laboratory များ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သွားဆေးခန်းအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ လူနာများစွာကို အကောင်းဆုံး ကုသမှုများပေးလျက်ရှိပြီး ဆုများစွာဆက်တိုက်ရရှိထားသော ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော သွားဆေးခန်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ရရှိထားသော ဆုတံဆိပ်များတွင် Prime Minister Export Award, Baipo Business Awards နှင့် Asia Pacific Awards for medical and dental provision တို့ပါဝင်ပါသည်။
International Standards & Hospital Sterilization
BIDH သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း ကြီးအား စတင်တည်ဆောက်သည်မှစ၍ Joint Commision International (JCI) မှ ချမှတ်ထားသော စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရောဂါပိုး သန့်စင်စနစ်အား ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။
သွားနှင့်ခံတွင်း အထူးကု ဆေးခန်း
သင်၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်များမှ ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ကုသမှုပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သွားမြစ်အတု အစားထိုး ကုသမှုဆိုပါက သွားမြစ်အတု အထူးကုဆရာဝန်မှသာ ကုသပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးကု သွားဆရာဝန် အများစုသည် အမေရိကန် နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးပညာ လက်မှတ်များရရှိထားပြီး အများစုမှာ နိုင်ငံခြားဘွဲ့လွန် ရထားသူများဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဝါရင့် အထူးကု သမားတော်ကြီးများမှ ကုသပေးသောကြောင့် လူနာများအနေနှင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။
IMPLANTOLOGISTS Prosthodontists Orthodontists Our Dentists
သွားမြစ်တုအထူးကုဆရာဝန်များသည် Nobel Biocare နှင့် Straumann သွားမြစ်အတု အစားထိုးကုသမှုများအား ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာမှ သွားဆရာဝန်များကို ပြန်လည် သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ဆရာများဖြစ်သည်။
Thailand Nobel Biocare Center
မေးရိုးအပြည့်သွားပြန်စိုက်ရာတွင် All-on-4 ဟုခေါ်သော သွားမြစ်အတု ၄ ချောင်းပေါ်တွင် သွားအပြည့်ပြန်စိုက်ခြင်းကုသမှုများအား ထိုင်းနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းသွားမြစ်အတုအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများမှ လူနာများစွာကို ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
သွားမြစ်တုကုသမှုများကို အထူးကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။
သင်တို့၏အပြုံးများ ပိုမိုလှပဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် Digital Smile Design (DSD) နည်းပညာဖြင့် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။
Invisalign သည် ဖြုတ်လို့တပ်လို့ရသော အကြည်ရောင်သွားစွပ်လေးများနှင့် သွားညှိခြင်းဖြစ်သည်။ BIDH တွင် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်၍ အရည်အချင်းရှိသော သွားညှိအထူးကုဆရာဝန်များမှ ကုသမှုပေးပါသည်။
သွားညှိကုသမှုများကို ခေတ်မီ Digitalized intraoral scans, 3D computer simulation technology နှင့် Digital imaging များ အသုံးပြုကုသပါသည်။ Invisalign သွားအစွပ်လေးများသည် အမေရိကန်လက်မှတ်ရ ကုသမှုဖြစ်သည်။
သွားမြစ်အတုသည် သွားမရှိသောနေရာတွင် သွားအသစ်တစ်ချောင်းကဲ့သို့ ပြန်စိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ BIDH တွင် ခေတ်မီ CT scan နှင့် Digitalized x-rays စက်များအသုံးပြုပါသည်။
သွားအတွဲလိုက်စိုက်ခြင်းသည် ဘေးသွားများ၏ အကူအညီယူကာ သွားပြန်စိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ သွားဆေးခန်းသို့ ၂ ခေါက်သာ လာရန်လိုအပ်ပါသည်။
အံကပ်များသည် ဖြုတ်တပ်ရသောသွားအရှင်စိုက်နည်းဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး သန့်ရှင့်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပါသည်။
ကြွေသွားစွပ်လေးများကို အကောင်းဆုံး IPS Empress eMax နှင့် ပြုလုပ်ပြီး သင်၏ အပြုံးအား သဘာဝကျ လှပစေပါသည်။
ဆေးခန်းတွင် ၁နာရီခန့် အချိန်ပေးရုံဖြင့် သွားဖြူအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သွားချေးများအား သွားဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်သန့်ရှင့်ရေးပြုလုပ်ပေးခြင်းသည် သင်၏ သွားများကို သန့်ရှင်းလှပစေပါသည်။ Airflow teeth polishing နည်းပညာဖြင့် သွားပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
ပျက်စီးသွားသော သွားများအား နဂိုမူလ ပုံစံကဲ့သို့ သွားအစွပ်စွပ်နိုင်ပါသည်။
သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်းသည် သွားအတွင်းရှိ ရောဂါပိုးများကို သန့်စင်ပေးပြီး သွားကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ သွားအကြောထုတ်ပြီးပါက သွားအစွပ်စွပ်နိုင်ပါသည်။
ပိုးစားနေသော သို့မဟုတ် ငွေရောင်ဆေးဖြင့် ဖာထားသော သွားများအား သွားရောင်ဖြင့် သွားဖာနိုင်ပါသည်။
သွားပုံစံမလှခြင်း ၊ သွားအရောင်မလှခြင်း ၊ သွားအနည်းငယ်မညီညာခြင်းများကို ကြွေသွားတုဖြင့် လှပအောင် ပြလုပ်နိုင်ပါသည်။
Invisalign သည် အကြည်ရောင် အံစွပ်လေးများဖြင့် သွားညှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်း တွင် ခက်ခဲသော သွားရောဂါကုသမှုများ နှင့် မေးရိုးအပြည့် သွားအစားထိုး စိုက်ခြင်းများကို လူနာများစွာအား အောင်မြင်စွာကုသပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Bangkok International Dental Hospital receives the 2019 Best Aethetic Dental Provider of the year in Asia Pacific for its top team of aesthetic specialists and prosthodontists.
Actor Mark Siwat, actress, international models and expatriates choose BIDH Dental Hospital due to its team of highly skilled dental specialists.
သှားဆေးခနျးကွောကျတတျသော စိုးရိမျလှယျသော လူနာမြားအတှကျ
For Dental Anxiety and Dental Phobic Patients
ကြှနျုပျတို့ သှားနှင့ျခံတှငျးဆေးရုံတှငျ သှားရောဂါမြားကို နာကြဥျမှုမရှိစရေနျ မေ့ဆေးအသုံးပွုကုသခွငျးဝနျဆောငျမှု ပေးလကြျရှိပါသညျ။ BIDH တှငျ လိုငျစငျရ မေ့ဆေးဆရာဝနျကွီးမြားနှင့ျ အခြိနျပွည့ျ သူနာပွုမြားရှိသညျ။စိတျခရြသော မေ့ဆေးကုသမှုပေးနိုငျရနျ အမရေိကနျ ASA အဖှဲ့အစညျးမှ ခမြှတျထားသည့ျ စံနှုနျးမြားအတိုငျးလိုကျနာပါသညျ။ စိုးရိမျလှယျသော လူနာမြားအနနှေင့ျ သှားရောဂါကုသမှုမြားကို နာကြဥျမှုကငျးမဲ့စှာ ကုသမှုခံယူနိုငျပါသညျ။
Digital Dentistry & Dental Technologies
လူနာများဘေးကင်းစေရန် ၊ မြန်ဆန်သော ကုသမှုရရှိစေရန် နှင့် ရောဂါပိုးကင်းစင်စေရန် သွားဆေးခန်းသုံး ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ ရွေးချယ်အသုံးပြုပါသည်။
BIDH ဆေးရုံတွင် ကိုယ်ပိုင် သွားတုအလုပ်ရုံရှိသောကြောင့် လူနာတစ်ဦးချင်းတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေလှပသော သွားတုများကို အချိန်တိုအတွင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
BIDH ဆေးရုံရှိ 3D CT scan, digitalized x-rays, digital scans, dental implants surgical guides နှင့် CAD/CAM digital flow systems တို့ကို ကမ္ဘာထိပ်တန်း သွားပစ္စည်း ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပါသည်။
လူနားများအတွက် တင်းကျပ်သော ရောဂါပိုးသန့်စင်စနစ် စံနှုန်းများ ထားရှိ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
လူနာများ၏ ဘေးကင်းမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ဆေးရုံစတည်ဆောက်စဥ်မှ စ၍ ပိုးသန့်စင်စနစ်များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီတည်ဆောက်ထားပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စ၍ Myanmar Airways International (MAI) နှင့် Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းတို့၏ Sky Smile frequest [...]